Naya Bikalpa | प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच बढ्यो चिसो, भेटघाट समेत बन्द ! - Naya Bikalpa प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच बढ्यो चिसो, भेटघाट समेत बन्द ! - Naya Bikalpa
प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच बढ्यो चिसो, भेटघाट समेत बन्द !
प्रकाशित मिती: २०७७ भाद्र २, १३: १३: ४४
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नी सापकोटाबीच बढेको चिसो उत्कर्षमा पुगेको छ ।
अमेरिकी परियोजना एमसीसी र संसद स्थगनका बिषयमा विवाद बढेपछि यी दुई नेताको सम्बन्ध बिग्रिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली सुरुमा नै सापकोटालाई सभामुख बनाउने पक्षमा थिएनन् । उनले आफु अनुकुलको सभामुखको खोजी गरेका थिए । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सापकोटाको पक्षमा अडान लिएपछि ओली बाध्य भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
पूर्व माओवादी पक्षले एमसीसीको विपक्षमा गएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई योजनाबद्ध फसाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पक्षधरहरुले भने यसको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको सम्बन्ध चिसिदै जानुलाई पनि सभामुख प्रधानमन्त्रीबीच तनाव बढदै गएको एक नेताले बताए । सापकोटाले प्रचण्डको सल्लाहमा काम गरेको बालुवाटार पक्षको आरोप छ ।
एमसीसी विवाद मुल जड
एमसीसी विवादले सभामुख र प्रधानमन्त्री मात्र होइन सिंगै देश यसको पक्ष र बिपक्षमा बिभाजित छ । नेकपाभित्र यसको विवाद बढ्दै गएपछि एक कार्यदल बनाएर सुझाव मागिएको थियो । माघ १९ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्नु नहुने सुझाव दिएको थियो । यस्तो सुझावपछि प्रधानमन्त्री ओली झन् अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सभामुखबीच ‘चेस खेल’ जस्तो
सम्बन्ध चिसिदै गएपछि एमसीसीको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच चेस खेलजस्तै गतिविधि भएको थियो ।
अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्न दवाव दिएपनि पार्टी भित्रको विरोध र सभामुख सापकोटाको असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गए ।
अमेरिकाले असार १६ भित्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न समय सीमा दिएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले समय सीमा सकिएको भोलिपल्ट अर्थात असार १७ गते मात्र संसदको बैठक बोलाएका थिए ।
सापकोटा माथि ओलीको यस्तो बदला
एमसीसीमा सभामुख सापकोटा अवरोध बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उनीसंग गजवको बदला लिए । १७ गते दिउँसो संसदको बैठक बस्यो । त्यसमा कुनै विधेयक छलफल भएन ।
जव कि दर्जनौ बिधेक छलफलका लागि तयार थिए । सभामुख सापकोटाले एमसीसीको समय सीमा कटाएको भन्दै सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारीस गर्यो ।
यसभन्दा अघि यस्तो निर्णय सभामुखसंगको परामर्शमा गर्ने चलन थियो ।
प्रधानमन्त्री सभामुख भेटघाट बन्द
प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच करिव तीन महिनादेखि भेटघाट बन्द भएको स्रोतले बताएको छ ।
औपचारिक कार्यक्रममा समेत कोराना भाईरसका कारण भएकोले उनीहरुको जम्काभेट नभएको लामो समय भएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
२०७७ भाद्र २, १३: १३: ४४